Izixhobo ezikwi-Intanethi ukubeka imvelaphi emhlophe kwifoto | Iindaba zeGajethi
UPaco L Gutierrez | | Ukufota
Ukuhlelwa kweefoto yinto enokufikelelwa nguye nabani na oneselfowuni okanye ikhompyuter kwaye oku kusinika uluhlu olubanzi lwezinto ezinokwenzeka xa usebenza nefoto. Ukutshintsha imvelaphi ibe mhlophe yeyona nto iceliweyo ngabantu, kodwa ayinguye wonke umntu owaziyo ngokuqinisekileyo ukuba yeyiphi icebo lokucoca ulwelo okanye loluphi usetyenziso onokulusebenzisa ukufezekisa esi siphumo. Imvelaphi emhlophe inika iifoto ukujonga ngokungaguquguqukiyo kwaye ngaphandle kweziphazamiso.
Ukongeza koku, esinye sezizathu inokuba kukuba sifuna ukusebenzisa iifoto kakuhle ukuyisebenzisa kumaxwebhu asemthethweni, njenge-DNI yethu okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Kuqheleke kakhulu ukusebenzisa olu hlobo lwesixhobo kwiifoto zeprofayili okanye ii-avatars. Kule nqaku siza kubonisa ezona ndlela zibalaseleyo zokutshintsha imvelaphi yeefoto zethu zibe mhlophe ngamanyathelo alula.
1 Izixhobo ezikwi-Intanethi ukubeka imvelaphi emhlophe
2 Izicelo zokubeka imvelaphi emhlophe kwiselfowuni
2.3 Umhleli woMlingo oMnyama oMnyama
Izixhobo ezikwi-Intanethi ukubeka imvelaphi emhlophe
Ukusetyenziswa kwewebhu okuguquguqukayo okusinika umhleli okwaziyo ukubona abantu kunye nezinto okanye izilwanyana. Iya kususa ngokupheleleyo imvelaphi yomfanekiso kwimizuzwana embalwa. Le webhu sayithi ilula ukuyisebenzisa njengokungena kwiwebhusayithi esemthethweni.
Nangona ukusebenza kwayo kwi-Intanethi kuchanekile, Sinesicelo sedesktop ukuba kukho imfuneko, zombini iiWindows, iMacOS okanye iLinux. Esi sicelo sedesktop sisinika lula kunye nomsebenzi wokucima imvelaphi yeqela leefoto ngobuninzi kwangoko.
Inokudityaniswa nezinye izixhobo ezinje ngeZapier apho sifumana ezinye iiplagi zokuyidibanisa namanye amaqonga. Ukuba sifuna into efanayo nevidiyo, umphuhlisi ofanayo unesixhobo sokucima imvelaphi yeevidiyo.
Esinye isixhobo esikhethekileyo sokucima imali kukususa i-AI, ethi uninzi lwayo ibe yeyona ilungileyo ukusukela ayijongi nje kuphela ukupheliswa kwemvelaphi kodwa ikongeza ukwanda kokuqhubekeka ngobukrelekrele bokuzenzela enika umfanekiso ukungaguquguquki ekungekho esinye isicelo sewebhu esikunika sona. Isiphumo sifana kakhulu nento esinokuyifumana ngomhleli weefoto, into ekufuneka siyixabise ukuba sifuna ukusebenzisa ukufota kakhulu.
Ngamafutshane, ukuba ufuna into ekhawulezayo ngokususa i-BG sanele, kodwa ukuba ufuna iziphumo ezingaphezulu "ezintle", i-AI yokuSusa ilungile.
Izicelo zokubeka imvelaphi emhlophe kwiselfowuni
Ukuba sijonga abahleli bezithombe, siya kufumana ezininzi apho sinesi sixhobo, kodwa azikho kangako yenza kube lula kuthi ukuba sizisebenzise kwangoko. Apha siza kuya kwiinkcukacha zezona zi-3 zibalaseleyo kwaye zilula ezikhoyo kwiselfowuni.
Esinye sezixhobo ezithandwa kakhulu ekuhleleni iifoto ngokungathandabuzekiyo yiAdobe Photoshop, efanelekileyo kuzo zombini iikhompyuter kunye nokuhlela i-smartphone. Kulula ukuba igama libethe intsimbi kuba ukongeza kulungiso lwezithombe inezinye izicelo. Ukongeza ekubekeni imvelaphi emhlophe kwiifoto, sinezinto ezinje ngokukhetha imifanekiso, ukusebenzisa izihluzi, ukwenza uyilo lomntu okanye ukwenza ii-watermark.
Sineenguqulelo ezahlukeneyo zolu setyenziso, phakathi kwazo sifumana uguqulelo lweWindows, uguqulelo lweMacOS phantsi kobhaliso kunye nokusetyenziswa kwetheminali yeselfowuni zombini nge Android njengaye iOS. Ukuba ujonga isicelo esiguqukayo, ukongeza ekubeni nesixhobo esisinika lo msebenzi, ikwasinceda ukuba senze ushicilelo olulula lweefoto zethu, ngaphandle kwamathandabuzo olu lolona khetho lufanelekileyo.
Iifoto zoMhleli weFotohop Express
Esi sicelo sizinikele ngokukodwa kulo msebenzi uthile, ngokungathandabuzekiyo yeyona nto ibonisiweyo ukuba injongo kuphela kukuba, nangona ayinazo zonke iinketho zokuhlela eziphambili ezinayo iAdobe. Ikuvumela ukuba ucime iimali ngokuzenzekelayo kunye nobukrelekrele bokwenza isicelo uqobo. Ukongeza, isicelo sisinika uluhlu lwemibala ecacileyo ukongeza kwimibala emhlophe okanye ecekeceke ngakumbi.
Isicelo sisinika uninzi lweetemplate, kodwa sinokusebenzisa imifanekiso yethu ukutshintsha imvelaphi kwaye ngenxa yoko senze izinto ezizodwa. Isicelo siyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOSUkusebenza kwayo kulula kakhulu. Oku kusinceda ukuba senze i-PNG ngemifanekiso kwaye siyisebenzise ukuhlela umfanekiso. Sinokubona iinguqulelo zayo ezahlukeneyo kunye neemfuno zayo iwebhusayithi esemthethweni.
Umhleli woMlingo oMnyama oMnyama
Olunye usetyenziso olukhulu olunikezelwe ngokukodwa ekudalweni kwesicelo sePNG kunye nemvelaphi yeefoto zethu ezifanelekileyo kubasebenzisi be-iPhone. Kuqwalaselwa ngabasebenzisi bayo isicelo esimnandi kakhulu kunye nesinomdla sokuhlela. Isicelo kulula kakhulu ukusisebenzisa nakweyiphi na i-terminal kwibhloko ngaphandle kokucothisa okanye ukusilela.
Isicelo sisikhokela ukuze sikwazi ukuhlela ngokulula iifoto zethu, sinokufaka imvelaphi ebonakalayo ekuhleni yePNG, imvelaphi emhlophe okanye imvelaphi kwigalari yethu. Ikwasinika inkululeko yokuhlela size siphinde sisebenzise iifoto ngendlela esithanda ngayo, songeza iifilitha okanye siphinda sisebenzise umbala wazo. Kufuneka sikhuphele usetyenziso kwiAppStore kwaye uyonwabele simahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukufota » Izixhobo ezikwi-Intanethi ukubeka imvelaphi emhlophe kwifoto
Eyona midlalo yokudubula ilungileyo kwiPC